အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ် တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေး၏ အဓိကဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့လယ် မြင်ကွင်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး၏ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ် တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေး၏ အဓိကဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝမ်သည် ၁၇ ကြိမ်မြောက် ပေကျင်း-တိုကျိုဖိုရမ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထိုသို့ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးသည် ရာစုနှစ်အတွင်းနှင့် လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ကပ်ရောဂါအတွင်း မမြင်နိုင်သော ကြီးမားသည့် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေးသည်လည်း အရေးပါသော အဆင့်၌ ရောက်ရှိနေကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
လာမည့်နှစ်သည် တရုတ်-ဂျပန် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်မြောက်သည့် အခါသမယဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပရန် အရေးကြီးဆုံးအရာများမှာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ပြန်လည်ရောက်ရှိမှု၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ နှစ်နိုင်ငံကြား နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက် လေးရပ်၏စိတ်ဓာတ်ကို လိုက်နာရန်၊ တရုတ်-ဂျပန် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းတာဝန်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းအား ပိုမို၍သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာဖြင့် စေ့စေ့စပ်စပ်ရှိပြီး လာမည့်နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာအား ပိုမိုခိုင်မာ ထိရောက်စွာ အသုံးချရန် ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး၏ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ် တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ရေးသည် တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေးအတွက် အဓိက ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကျိုးကြောင်းညီညွတ်လျက် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျသောလမ်းကြောင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လျင်မြန်သော ဖွံ့ဖြိုတိုးတက်မှုကို သုံးသပ်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
သမိုင်းကြောင်းနှင့် ထိုင်ဝမ်ပါဝင်သော ကိစ္စရပ်များသည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၏ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းအနေဖြင့် မည်သည့်အခြေအနေအောက်တွင်မဆို တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံကြား စည်းမျဉ်းများနှင့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက် စိတ်ဓာတ် ၄ ရက်ကို လိုက်နာသင့်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု မြင့်မြင့်မားမားဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်နှင့် ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက် တည်ငြိမ်ရေးကို ပူးတွဲထိန်းသိမ်းရန် စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းသင့်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ နေထိုင်မှုဘဝ မြှင့်တင်ရန် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းသင့်ကြောင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ် မြှင့်တင်ရန် ကာဗွန်လျှော့ချရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းသင့်ကြောင်း ဝမ်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေး၌ သဘောမတူညီမှုများရှိသည်မှာ ရှောင်လွှဲ၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အဓိကအချက်မှာ ၎င်းတို့အား သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အဓိပ္ပါယ်နှင့် လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်မှုမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ပထဝီဝင်အရထိစပ်နေပြီး ယဉ်ကျေးမှုချိတ်ဆက်မှု၌ ထူးခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများ အပြည့်အဝပါဝင်ရေး၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောနည်းလမ်း၌ နယ်ပယ်စုံတွင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများ အားကောင်းရေး ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ သို့မှသာ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေးသည် ပိုမိုထင်ရှားပြီး ခေတ်ကာလနှင့် ချင့်ချိန်ကာ ပြည်သူများ၏ နှလုံးသားတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လူငယ်များ ဖလှယ်မှုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ကာလရှည်သဘောထားနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်းလည်း ဝမ်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးကြီးသောနိုင်ငံများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားများဖန်တီးရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဝမ်က မိန့်ခွန်းအရ သိရသည်။
ပေကျင်း-တိုကျိုဖိုရမ်သည် တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေး အာရုံစိုက်မှု၊ ဆွေးနွေးမှုနှင့် မြှင့်တင်မှုအတွက် အရေးပါသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။ “ဒီဖိုရမ်က နှစ်နိုင်ငံမှ ပြည်သူများ၏ ထိုးထွင်းသိမြင်သောဉာဏ်က တက်ကြွစွာ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ်မှာ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေး တိုးတက်မှုဆီ အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ အမြင်များ ကူညီပေးဖို့ အစွမ်းသတ္တိရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ပေကျင်း-တိုကျိုဖိုရမ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖိုရမ်အား ပေကျင်းမြို့နှင့် တိုကျိုမြို့တွင် တစ်လှည့်စီကျင်းပခဲ့ရာ နှစ်နိုင်ငံကြား အဆင့်မြင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-26 01:18:57|Editor: huaxia
BEIJING, Oct. 25 (Xinhua) — Rebuilding mutual trust and consolidating the political foundation of bilateral relations are the key to Sino-Japanese ties, Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said Monday.
Noting rebuilding mutual trust and consolidating the political foundation of bilateral relations are the key to Sino-Japanese relations, Wang expressed the hope that Japan will view China’s rapid development inamore rational and objective way.
He also called for upgraded cooperation with mutual benefit atahigher level, adding that the two sides should deepen industrial cooperation to jointly safeguard the stability of global industrial chain and supply chain, strengthen digital economy cooperation to boost the economy and people’s livelihood of the two countries, and strengthen carbon reduction cooperation to promote the climate change agenda.
The Beijing-Tokyo Forum is an important platform for publicity, discussion and promotion of China-Japan relations, Wang said. “It is hoped that people of insight from the two countries will actively interact, have the courage to make suggestions, and contribute insights to the development of China-Japan relations in the new era.”
The Beijing-Tokyo Forum is an annual event launched in 2005. Held alternately in Beijing and Tokyo, the forum serves asahigh-level and large-scale interactive exchange platform between the two countries. Enditem